ကိပ်တောင်း | ခရီးသွားသတင်း
ကိပ်တောင်း ၎င်းသည်တောင်အာဖရိက၏အရေးအပါဆုံးမြို့ကြီးများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စိမ်းလန်းသောစပျစ်ဥယျာဉ်များမှကေဘယ်ကြိုး၊ ကားတစ်စီးစီး။ ကမ်းခြေသို့သွားသောအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာသို့သွားခြင်း၊ အရက်ဆိုင်များနှင့်ပြတိုက်များသို့သင်စီးနင်းနိုင်သည်။
1 ကိပ်တောင်း, ကိပ်တောင်း
2 Cape Town သို့လည်ပတ်မည်
၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်စူးအက်တူးမြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းမပြုမီ၊ အာရှသို့ခရီးသွားသည့်ဥရောပသင်္ဘောများသည် Cape Town တွင်မဖြစ်မနေရပ်နားရန်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးနယ်သာလန်အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ၏တက်ကြွကုန်သည်သင်္ဘောများ။ ထိုအချိန်ကမြို့သည်ထောက်ပံ့ရေးစခန်းဖြစ်သည်။ ရွှေတူးဖော်ခြင်းပေါက်ကွဲသည်အထိဒေသတွင်းရှိအရေးအကြီးဆုံးမြို့လည်းဖြစ်သည်။
ဒတ်ခ်ျတို့သည်ဗြိတိသျှတို့ကမြို့မှနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရသည် ၁၈ ရာစုအကုန်ပိုင်းနှင့်ပြည်တွင်းပconflictsိပက္ခများဖြစ်ပွားပြီးနောက် မင်္ဂလာပါ ဗြိတိသျှအင်ပါယာသည်ထိုဒေသကိုလုံးလုံးလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျော်ကြား အသားအရောင်ခွဲခြားလူဖြူများနှင့်လူမည်းများအကြားတိုင်းပြည်ခွဲခြားမှုကြောင့် Ciudad del Xabo သည်ဤကြောက်မက်ဖွယ်ခွဲထွက်ရေးဝါဒကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများစွာ၏ဗဟိုချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်ရပ်ကွက်အများအပြား၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများရှိသည့်မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိတ်ဆိတ်သောမြို့တစ်မြို့မဟုတ်သကဲ့သို့ကြီးမားသောအရွယ်အစားရှိသောမည်သည့်မြို့မျှမဆိုလူမှုရေးအရကွဲပြားခြားနားမှုများပြားစွာဖြင့်သင်သည်သတိထားရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့မသိသောမြို့တစ်မြို့သို့သွားသူမည်သူမဆို၏ပုံမှန်စောင့်ရှောက်မှု။
Cape Town သို့လည်ပတ်မည်
ကိပ်တောင်း ၎င်းသည်တောင်အာဖရိကတွင်အကျော်ကြားဆုံးမြို့ဖြစ်သည် ထိုသို့ခန့်မှန်းထားသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၂ သန်းလာရောက်လည်ပတ်သည်။ တက္ကစီ၊ စက်ဘီး၊ ဘတ်စ်ကား၊ ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ရထားဖြင့်သင်သွားလာနိုင်သောမြို့ဖြစ်သည်။
မြို့ထဲမှာတချို့ရှိတယ် ရေပေးဝေရေးပြနာ somewhatရိယာအတန်ငယ်ခြောက်သွေ့ကတည်းက။ ၎င်းသည် ၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အကြားတွင်ပြင်းထန်သောအကျပ်အတည်းများရှိခဲ့သော်လည်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြproblemsနာများကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဒေသခံများနှင့် visitors ည့်သည်များကိုဂရုစိုက်ရန်၊ ရေတိုရေလောင်းရန်၊ သို့တိုင်ထိုသို့ဆိုရမည်ဖြစ်သည် ကိုထိပုတ်ပါရေသောက်ဖြစ်ပါတယ်.
မြို့တော်သည်ဖြစ်နိုင်သမျှလည်ပတ်မှုများစွာကိုပေးထားသော်လည်းအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အချိန်မည်မျှရှိသည်ကိုမူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောမည် ကိပ်တောင်းသို့ပထမ ဦး ဆုံးခရီးစဉ်၌မည်သူမျှမလွဲနိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, တောင်တက် စားပွဲတင်တောင်: Table Mountain ။ ၎င်းသည်မြို့၏ပုံဆောင်တောင်ဖြစ်ပြီးစားပွဲတင်တောင်တန်းအမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းရှိအပြားပါသောတောင်တစ်လုံးဖြစ်သည်။ 2011 ခုနှစ်မှစ။ ကတစ်ခုဖြစ်သည် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ၇ ခု။
ထိပ်ရှိကုန်းပြင်မြင့်သည်နှစ်မိုင်ခန့်အကွာတွင်ရှိပြီးမတ်စောက်သောချောက်ကမ်းပါးများနှင့်တောင်စောင်းများရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင်စာတန်၏ထိပ်နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်ခြင်္သေ့ခေါင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအချက်မှာ MacLear Lighthouse ဖြစ်သည်။ ၁၈၆၅ ခုနှစ်တွင်အမြင့် ၁၀၆၆ မီတာအမြင့်တွင်တည်ရှိသောရိုးရှင်းသောကျောက်တုံးများဖြစ်သည်။ ပြားချပ်ချပ်ထိပ်ကိုများသောအားဖြင့်တိမ်များဖြင့်အလှဆင်ထားပြီးကေဘယ်လ်ကားဖြင့်ရောက်ရှိသည်။ ဤသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်များမှစတင်ကာပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါစီးနင်းချောမွေ့သည် ငါးမိနစ်အတွင်းမှာပဲထိပ်ဆုံးကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်တစ်ပတ်လျှင်ခုနစ်ရက်အလုပ်လုပ်ပြီးတစ်မိနစ်အကြား ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်ကြားခြားမှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ယနေ့တောင်ပေါ်သို့ပထမဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုသည်နံနက် ၈ နာရီနှင့်နောက်ဆုံးည ၇ နာရီတွင်ဖြစ်သည်။ အသွားအပြန်လက်မှတ်မှာ R360 ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်သူနှုန်း အပေါ်ထပ်တွင်ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုရှိပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ပျော်ပွဲစားစားသောက်နိုင်သည်။ အမြင်များသည်ကြီးလှ၏။
ရွှေ့ဆိုင်း။ မရသောနောက်ထပ်လည်ပတ်မှုတစ်ခုမှာ ရော်ဘင်ကျွန်းနှင့်၎င်း၏ပြတိုက်။ ဒီကျွန်းပေါ်ကထောင်ထဲမှာသူထောင်ကျခဲ့တယ် နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား။ guide ည့်လမ်းညွှန်တွင်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရသူဖြစ်ပြီးမာလ်တီမီဒီယာပြပွဲ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဆိုင်တစ်ဆိုင်နှင့်ကျွန်း၏ရှုခင်းများစွာပါ ၀ င်သည်။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံနှင့်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် သမိုင်းနှင့် xenophobia အပေါ်မာစတာအတန်း။ ထို့အပြင်ကျွန်းပေါ်သို့ကူးတို့လည်းလမ်းလျှောက်ရန်ကောင်းသောလမ်းဖြစ်သည်။
ဒီခရီးစဉ်ကသုံးနာရီခွဲပါ ကျွန်းမှအပြန်အလှန်ခရီးစဉ်အပါအဝငျ။ ကျွန်းပေါ်သို့ရောက်သောအခါ visitors ည့်သည်များသည်သမိုင်းဝင်နေရာများသို့ပို့ဆောင်သောဘတ်စ်ကားစီးရမည်ဖြစ်ပြီးတနင်္လာနေ့မှတနင်္ဂနွေမှညနေ ၈ နာရီမှညနေ ၅ နာရီအထိခရီးစဉ်နှင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ခရီးစဉ်များကိုအွန်လိုင်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကူးတို့ထွက်ခွာသည့်alsoရိယာသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလည်ပတ်ရန်ထိုက်တန်သည်။ အကြောင်းဖြစ်သည်ဌMalecón V & Aတစ်နှစ်လျှင် ၂၄ သန်းကျော်လာရောက်လည်ပတ်သောတိုက်ကြီးရှိအလည်ပတ်ဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဖြစ်ပါသည် ၎င်းသည်နိုင်ငံအတွင်းရှိသက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည် နှင့်ပို့စကတ်နောက်ကွယ်မှ Table Mountain ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနှင့်အတူပြီးစီးခဲ့သည်။ ပိုပါတယ် အမျိုးမျိုးသောအစားအစာများကိုစားရန်နေရာ ၈၀၊ ဟိုတယ် ၁၂ လုံး၊ ဈေး ၅၀၀၊ ပြတိုက် ၅ ခု၊ နှင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖျော်ဖြေရေးအများကြီး။
သငျသညျသိခဲ့ပါ တောင်အာဖရိကကဝိုင်တွေထုတ်လုပ်တယ်? သငျသညျဤဝိညာဉျကိုသောက်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်သင်ကိပ်တောင်း၌ရှိကြ၏လျှင်သင်ပြုနိုင်သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း တက်သွား Franschhoel ဝိုင်ရထား။ ၎င်းသည် hop-on hop-of-style stylecar ဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် စပျစ်ဥယျာဉ်များကို၎င်းသိမှတ်ကြလော့ ရာစုနှစ်သုံးခုဝိုင်ပြုလုပ်သည့်အစဉ်အလာနှင့်အတူ Franschhoek ချိုင့်မှ။ လှုပ်ရှားမှုများကြည့်ရှုရန်, ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတဆင့်လှည့်လည်ခြင်းနှင့်ဝိုင်အရသာမှစပျစ်ဥယျာဉ်အပေါငျးတို့သမှာလမ်းရထား။
အပြာရောင်လိုင်း၊ အနီရောင်လိုင်း၊ Yeloww လိုင်းနှင့်အစိမ်းလိုင်းလိုင်းတို့တွင်လမ်းရထားနှင့်လမ်းရထားကိုပေါင်းစပ်ထားသောဝန်ဆောင်မှုများရှိသည်။ ခရီးစဉ်တစ်ခုစီသည်စပျစ်ဥယျာဉ်ရှစ်ခုသို့သွားပြီးချိုင့်၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ကိုပြသည်။ စပျစ်ဥယျာဉ်ခုနစ်လုံးကိုသာလည်ပတ်သည့် Purple လိုင်းသည် tram ဘတ်စ်ကားဖြင့်သာဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။ နောက်တစ်ခုမှာနှစ်ထပ်ကိန်းရှိသည့်လိမ္မော်ရောင်။
ဝိုင်တွေကနေပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းကိုသွားခဲ့တယ် ပင်ဂွင်း။ ကြောင်းအပေါငျးတို့သ၌တည်ရှိ၏ ကျောက်သားများသဲသောင်ပြင်ရှိမုနျ၏မြို့နှင့်ကိပ်ပွိုင့်အကြား။ အဆိုပါပင်ဂွင်းကိုလိုနီသည်လူနေအိမ်ofရိယာ၏အလယ်တွင်ရှိသောကြောင့်စိတ်ကူးယဉ်သည်။
ကမ်းခြေသည် Table Mountain National ဥယျာဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးဝင်ပေါက်ကိုသင်ပေးရသည်၊ သို့သော်အတွင်း၌အိမ်သာများနှင့်ရေပန်းများရှိသည်။ ရေသည်နွေးထွေးပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးတိရိစ္ဆာန်များကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်တောင်းဆိုသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့ကိုမြင်ပြီးသူတို့ထံမှလေ့လာလိုပါကလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ center ည့်သည်စင်တာနှင့်အခြားသင်ကြားခြင်းများနှင့်အတူပညာရေးဆိုင်ရာလမ်းလျှောက်သင်ကြားပေးသော Foxy သဲသောင်ပြင်သို့သွားရန်လိုအပ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်မည်သည့်မြို့ကဲ့သို့မဆို၊ သင်သည်အဝေးမှစွန့်စားထွက်သွားခြင်း၊ ပြတိုက်များသို့လည်ပတ်ခြင်းနှင့် gastronomic ဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းမှုများကိုမွေ့လျော်လိုပါက၎င်းင်း၏ရပ်ကွက်များ (သို့) စင်တာများကိုဖြတ်လျှောက်နိုင်သည်။ အခြေခံစောင့်ရှောက်မှုနှင့်သာမန်အသိဖြင့်သင့်တွင်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » ကိပ်တောင်း